January 2021 - Achawlaymyar
ဘယ်ယောင်္ကျားလေးမှ ရုန်းမထွက်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှု (၈) မျိုး
January 31, 2021 by Achawlaymyar
ဘယ်ယောင်္ကျားလေးမှ ရုန်းမထွက်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှု (၈) မျိုး မိန်းကလေးတွေ ဆွဲဆောင်မှု ရှိဖို့ဆိုတာ ခက်မလိုလိုနဲ့ အရမ်းကို ရိုးရှင်းပါတယ် ။ တချို့သူတွေကတော့ ကိုယ်မွေးကတည်းက ပါလာတဲ့အရာကို ထုတ်မသုံးတတ်ကြတာပါ ။ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို ဆွဲဆောင်မှု အရှိစေဆုံးသော အရာတွေကတော့… (၁) နှုတ်ခမ်း ကိုက်တာ မိန်းကလေးတွေ နှူတ်ခမ်းကိုက်လိုက်တာဟာ ယာကျ်ျားလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာတင်မကပဲ နှုတ်ခမ်းတစ်စုံက အာရုံ စူးစိုက်မှုကိုပါ ရရှိစေပါတယ်… (၂) နူးညံ့တဲ့ အသားအရည် အသားရည် နူးညံ့တဲ့ မိန်းကလေးတွေထက် ဆွဲဆောင်မှုရှိတာ ဘာမှမရှိတော့ပါဘူး ။ ဒါကြောင့်ပဲ ရှေးခေတ်ကတည်းက အီဂျစ်လူမျိုးတွေ ရောမလူမျိူးတွေက ခန္ဓာကိုယ် အမွှေးတွေကို ရိပ်သိမ်းခဲ့ကြတာလေ… (၃) ဆံပင်ကို ရှင်းလင်းနေအောင် ချည်ထားတာ … Read more
ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ် ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ တစ်နှစ်စာဗေဒင်
January 30, 2021 by Achawlaymyar
ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ် ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ တစ်နှစ်စာဗေဒင် ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတို့သည် ယခုနှစ်တွင်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းများနှင့်တွေ့ဆုံပြီး လုပ်ငန်းခွင်များအောင်မြင်လာလိမ့်မည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားခရီးသွားလာခြင်းများ ကြုံလာတတ်သည် ပြည်တွင်းပြည်ပ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ခြင်း ကွန်ပျူတာနှင့် တီထွင် ပညာများ ဆောင်ရွက်ခြင်းကောင်း၏။ အပန်းဖြေစခန်းဖွင့်ခြင်း အလုပ်အသစ်များထူထောင်ခြင်း ကောင်း၏ ရေကြောင်း ခရီးသွားလာခြင်းများအထူးရှောင်ကြဉ်ရမည် အိမ်ခြံမြေကားတိုက်ခန်အပြောင်းအလဲများရှိမည် (14-4-2021) မှစ၍ (15-6-2021) အထိ အရာရာတွင် သတိနှင့် ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ လုပ်ငန်းကိစများအတွက် စနေတနင်္ဂနွေသားသမီးများနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းများ အထူးဂရုစိုက်ပေးရမည်။ မိတ်ဆွေများ ပေးထားသောကတိများ ပျက်ပြားခြင်းကြောင့် မိမိဆောင်ရွက်ထားသမျှ သဲထဲရေသွန်သလို ဖြစ်သွားတတ်သည်။ ဖုန်းနှင့် အဖိုးတန်ပစည်းများ ကျပျောက်ကိန်းရှိသည်။အိမ်ထောင်ရေး တွင် အထင်လွဲ ခံရတတ်သည်။ ပျိုရွယ်သူများ မိမိ မေတ္တာ ရေးအပေါ်၌ လေးလေးနက်နက်တန်ဖိုးထားသူများနှင့် တွေ့ကြုံရမည် ခရီးသွားလာရာတွင်လည်ကောင်း၊ ချစ်သူရည်းစားအဖြစ် ဆုံသွားရတတ်သည်။ ပညာရေးတွင်ဉာဏ်ရည်ထက်မြက် ကြီးမားလာလိမ့်မည်။ … Read more
အောင်လအန်ဆန်းနှင့် ဘစ်ဒက်ရ်ှတို့ ပြန်ထိုးသတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း One Chapionship ၏လူမှုကွန်ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ပြီ
January 29, 2021 by Achawlaymyar
အောင်လအန်ဆန်းနှင့် ဘစ်ဒက်ရ်ှတို့ လာမည့် ဧပြီလ ၂၁ ရက်တွင် ပြန်ထိုးသတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း One Chapionship ၏လူမှုကွန်ရက် တွင် ထုတ်ပြန် ချန်ပီယံအောင်လအန်ဆန်နှင့် ရုရှားနိုင်ငံသား ဗစ်တာလီဘစ်ဒက်ရ်ှတို့ လာမည့် ဧပြီလ ၂၁ ရက်တွင် တတိယ One Chapionship က ယင်း၏လူမှုကွန်ရက်တွင် “HUGE NEWS “ONE on TNT” kicks off on April7with four weeks of STACKED events featuring Adriano Moraes vs. “Mighty Mouse” Johnson ၊ Eddie Alvarez vs. Iuri Lapicus ၊ Christian … Read more
မနက်က ရွှေတိဂုံဘုရားအနီး ကြက်သီးထဖွယ်မြင်ကွင်းတစ်ခု.
January 28, 2021 by Achawlaymyar
မနက်က ​ရွှေတိဂုံဘုရားအနီးမှာ တက္ကစီတစ်စီး ပျက်သွား​တော့ လမ်း​တွေပိတ်တာ​ပေါ့….. ကုန်းတက်ကြီးဆို​တော့ ဘယ်အဆင်​ပြေပါ့မလဲ…..အနီးမှာရှိတဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲက​ ပြေးလာပြီး ကူတွန်းတယ်….ထင်သ​လောက် မတွန်းနိုင်ဘူး။ အဲဒီမှာ လက်တစ်ဖက်မရှိတဲ့ သတင်းစာ​​ရောင်းသည်က​ ပြေးလာပြီး ကူတွန်းတယ် တစ်ဆက်တည်း ပန်းသည်ရယ်၊ကွမ်းယာသည်ရယ်ကပါ ဝိုင်းတွန်း​တော့​ နောက်ဆုံး ပျက်​နေတဲ့တက္ကစီ ကုန်း​ပေါ်​ရောက်သွား​တော့တယ်။ လမ်းပိတ်​နေတာကလည်းရှင်းသွားတယ်…ကိုယ်လည်းဖုန်းအမြန်ထုတ်ပြီးမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ် ကားကို ဝိုင်းတွန်းတဲ့တစ်ဦးတစ်​ယောက်ချင်းစီကို​ လေးစားတယ်…..တကယ်​တော့သူတို့နဲ့မဆိုင်သလို​ နေလို့ရတာ​ပေါ့…… ဒါ​ပေမဲ့ ကိုယ်စီအသိစိတ်နဲ့​ပြေးလာပြီး တစ်​ယောက်တစ်ဖက် တစ်​ယောက်တစ်လက်နဲ့ဝိုင်းကူညီ​တော့​ နောက်ဆုံး ကားပိတ်တာကြီးကို​ ဖြေရှင်းသွားနိုင်တယ် အခု မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်​နေတဲ့ပြသနာ​တွေဟာ ကျွန်​တော်တို့ အတူတူ မရှိဘူးကြ​သေးလို့ပါ…..။ကျွန်​တော်တို့ အတူတူ မတွန်းရ​သေးလို့ပါ….။ ကျွန်​တော်တို့ အတူတူလက်ဆွဲမနှုတ်ဆက် ရ​သေးလို့ပါ….။လာပါ….လက်သီးဆုပ်​တွေဖြည်ပြီး လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီး ကျွန်​တော်တို့ အတူတူ ကုန်း​ပေါ်တက်မယ်​လေ ကျွန်​​တော်တို့ လက်​​​တွေစုပြီး ကဗျာတစ်ပုဒ်​ ချရေးမယ်…..။ကြိုက်တဲ့​ခေါင်းစဉ်တပ် ငြိမ်းချမ်း​ရေးအ​ကြောင်း​တွေ ပါ​ပါ​စေ … Read more
အင်္ဂလိပ်ရက် ၁ ရက် ၊ ၁၀ ရက် ၊ ၁၉ ရက် ၊ ၂၈ ရက်မွေးဖွားသောမိတ်ဆွေများအတွက် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဗေဒင်ဟောစာတမ်း….
January 27, 2021 by Achawlaymyar
အင်္ဂလိပ်ရက် ၁ ရက် ၊ ၁၀ ရက် ၊ ၁၉ ရက် ၊ ၂၈ ရက်မွေးဖွားသောမိတ်ဆွေများအတွက် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဗေဒင်ဟောစာတမ်း မင်းသိမ်းခိုင် – ရွှေရမ်းထူးလင်း ဖုန်း – 09 510 5437 ဝိဇ္ဇာ မ တဲ့အချိန် ၊ နတ်ကောင်း နတ်မြတ်တွေ မ တဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ် …။ ကံကောင်းတဲ့ အချိန်ကိုရောက်ပြီ။ အလုပ်ကိုင်အကြံစည်များ မြင့် မားတိုးတက် အောင်မြင်မယ်…။ အဖက်ဖက်ကနေ မုချတိုးတက်မှုတွေ ကြုံရမယ်…။ ပြီးခဲ့သော အချိန်ကာလတွေနဲ့ မတူတော့ဘူး။ အခုကောင်းပြီ။ စီးပွားရေး အလုပ်အကိုင်၊ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ ခရီးသွားလာရေး ဘယ်အရေးမဆို အားလုံး ကောင်းနေမယ်…။ အောင်မြင်တဲ့အထိ လုပ်ဖို့ … Read more
ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ ဒေသကနေ ဘုရားလာဖူးတဲ့ အဘွားတွေကို လူငယ်တစ်ယောက် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး မစူးစမ်းမဆင်ခြင်ဘဲ Onlineပေါ် တင်လိုက်သောအခါ..
January 26, 2021 by Achawlaymyar
မလှောင်ပါနဲ့ သားရယ် ရှက်စရာမဟုတ်ပါ….အဘွားတို့ကို မလှောင်ကြပါနဲ့ ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ ဒေသကနေ ဘုရားလာဖူးတဲ့ အဘွားတွေကို လူငယ်တစ်ယောက် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး မစူးစမ်းမဆင်ခြင်ဘဲ Onlineပေါ် တ င်လိုက်တယ်။ သူတင်လိုက်တဲ့ပုံက ခဏအတွင်းမှာပဲ ပြန့်သွားပြီး တစ်ချို့က လှောင်ကြ တစ်ချို့က မလှောင်သင့်ကြောင်းပြောကြတာပေါ့။ဒါကို အဲ့ဒီလူ ငယ်က မသိသေးပါဘူး… အဲ့ဒီနောက် အဘွားတွေရှိရာကို သွားပြီး အဘွားတစ်ယောက်ကို သွားမေးတယ်……. လူငယ် > ဘွားဘွား တစ်ခုလောက်မေးပါရစေ….? ဘွား၂> ရပါတယ်… မေးပါ သား…. လူငယ် > ဘွားဘွားတို့က ဘုရားဖူးလာတာဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ ဝတ်ကောင်းစားလှ ဝတ်ပြီး မလာကြတာလဲ..? သားတို့ မြို့ကြီးက လူတော်တော်များများက ဘုရားဖူးသွားကြရင် ဝတ်ကောင်းစားလှတွေ ဝတ်ကြတယ်…။ ဘွား၂> ဒီလိုကွဲ့သား…အဘွားတို့က ဘုရားကို ဖူးဖို့ပဲလာတာ…ဘုရားဖူးဖို့. … Read more
နာမည်ကို သိရှိရုံမျှနှင့် ကိုယ်တိုင် တွက်ချက်နိုင်သော အနောက်တိုင်း ဂဏန်းဗေဒင်နည်း
အမည် သင်္ချာ ဝိဉာဉ် ဂဏန်းအဟော အနောက်တိုင်း ဂဏန်းဗေဒင်နည်းအရ အမည်သင်္ချာဝိဉာဉ် ဂဏန်း တွက်ပုံတွက်နည်းကို ဦးစွာ ဖေါ်ပြလိုပါသည်။ ဒီနည်းက ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျွန်တော်ကစာဖတ်တဲ့အခါမှတ်စုထုတ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ မဂ္ဂဇင်း တစ်အုပ်အုပ်ထဲမှာ ပါတဲ့နည်းပါ။ (မဂ္ဂဇင်းတော့ မမှတ်မိတော့ပါ.ဂမ္ဘီရဆန်းကြယ်လို့ထင်ပါတယ်)ကိုယ်တိုင် တွက်စစ်လို့ရအောင်ပါ။ဤနည်းမှာ နာမည်တစ်ခုခုကို သိရှိရုံမျှနှင့် တွက်ချက်နိုင်ပါသည်။ အောက်ကပုံမှာဖေါ်ပြထားသည့် အက္ခရာစာလုံးများနှင့် သင်္ချာသက်မှတ်ချက်များအရ နာမည်တစ်ခု၏ အမည်သင်္ချာ ဝိဉာဉ်ဂဏန်း ကို တွက်ယူ နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ(၁) ကျော် ကျော် သန်း ဆိုသော အမည်ကို တွက်ချက်လိုလျှင်…… K yaw K yaw T han (၂+၁+၁+၆) + (၂+၁+၁+၆) + … Read more
“ဘယ်သူ့မှတောင် မေးစရာ မလိုတော့တဲ့ မိန်းကလေးတိုင်း အတွက် လျှို့ဝှက်ချက် (၁၀၀)”
မိန်းခလေးမှန်ရင် သိမ်းထားပါ… 1. မိတ်ကပ် လိမ်းခြယ်မယ်ဆို အောက်ခံ အသားအရည်ကို အရင် ကောင်းအောင် လုပ်ပါ/ 2. မိတ်ကပ်ကို အိမ်မှာနေရင် မလိမ်းပါနဲ့/ 3. မိတ်ကပ်ကို အပြင်သွားပြီး ပြန်လာတာနဲ့ တစ်ခါထဲ ဖျက်ပါ/ 4. မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့ နေ့တွေမှာ မျက်နှာကို သေချာ သန့်စင်ပါ ၊မိတ်ကပ်က မျက်နှာသစ် ဆပ်ပြာ တခုသုံးယုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး/ 5. မိတ်ကပ် ဖျက်မယ်ဆို မိတ်ကပ် remover သုံးပြီး သန့်စင်ပြီးမှ မျက်နှာသစ်ပါ/ 6. မိတ်ကပ် remover ကို အလေအလွင့် နည်းအောင် ယနေ့ခေတ် အသုံးများလာကြတဲ့ ready made ဂွမ်းလေးတွေ သုံးပြီးဖျက်ပါ/ 7. ဘူးအသန့်တစ်လုံး သို့မဟုတ် လေလုံအိတ် … Read more
အကြွေးကြေ အကြွေးလည်းရ ငွေဝင်လမ်းတဖွားဖွား ပွင့်စေသော အဓိဌာန်
ငွေကြေးအတွက် တင်ပေးထားတာတွေ များလို့ တစ်မျိုး မထင်ပါနဲ့၊ အခုလို ငွေရှာရခက်တဲ့ ကာလမှာ ကိုယ်လုပ်တာထက် ငွေဝင်လမ်း ကောင်းပြီး မိသာစုဘဝတွေ အဆင်ပြေနေနိုင် စားနီုင်းအောင် အလှူဒါနများ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါ လှူနိုင် တန်းနိုင်အောင် တင်ပြပေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်ဆီ လာအကူအညီတောင်းကြတဲ့ အထဲမှာ အကြွေးကိစ္စ ငွေကြေးကိစ္စတွေ့ပဲ များကြပါတယ်။ ငွေဆိုတာကလည်း လူတိုင်းရဲ့ ဘဝအတွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာက အရေးပါပါတယ်။ တင်ပေးထားတာတွေ များလို့ စိတ်မများကြပါနဲ့ ကိုယ်နဲ့ သင့်တော်မယ် နည်းစနစ် တစ်ခုခုကို လုပ်ဆောင်ပါ။ အခု ဖော်ပြမယ့်နည်းကတော့ အကြွေးတင်နေလို့ သောက ရောက်နေသူများ အကြွေး မြန်မြန်ကျေစေရန်၊ အကြွေး ရစရာရှိသည်များ မရပဲ ဖြစ်နေသူများ မိမိငွေ အမြန် ပြန်ရစေရန်၊ … Read more
ဒီ(၁၀)ချက်ထဲက (၅)ချက်လောက်နဲ့ကိုက်ညီနေရင် သင်ဟာတကယ်ချောတဲ့ကောင်မလေးပါ…
အလှအပကို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စံချိန်သတ်မှတ်ထားတာချင်းမတူညီပါဘူး ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ နိုင်ငံတကာက လူတွေတော်တော်များများက လှတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စံချိန်လေးတွေပါ..။ သင်ဟာ ဒီအချက်တွေထဲက ရချက်နဲ့အထက် ကိုက်ညီနေရင်တော့ တကယ်ကိုလှပချောမောတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ..။ (၁) သင့်မှာ မျက်ခုံးမွှေးဆွဲစရာမလိုလောက်အောင် လှပပြီးထူထဲတဲ့ မျက်ခုံးမွှေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ တစ်ခါတလေရိတ်ရတာကလွဲပြီး အထူးတလည်ပြင်ဆင်ပေးစရာမလိုပါဘူး (၂) သင့်ရဲ့ မျက်လုံးလေးဟာ လုံးဝစွေစောင်းမနေသလို၊ မျက်ရစ်လည်းရှိပါတယ်။ မျက်တောင်တွေက ကော့ညွတ်မနေသည့်တိုင် အကြ ည့်တွေက အရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်..။ (၃) သင့်ရဲ့ နှာတံလေးဟာ မချွန်ရင်တောင်မှ ပြားနေတာမျိုး၊ ပွနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ နှာတံစင်းစင်းလေးနဲ့ ကြည့်ကောင်းနေသူပါ..။ (၄) သင့်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးဟာ နှင်းဆီပန်းလေးလိုပဲ ခပ်ထူထူလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိနေမှာပါ။ လူတွေကသင့်ကို နှုတ်ခမ်းလှတယ်လို့ ပြောတာကို ခဏခဏ ကြားရမှာပါ..။ (၅) သင့်ရဲ့ သွားလေးတွေဟာ ဖြူဖွေးပြီး … Read more